Ọbịbịa nke Ahịa Imirikiti, Akwụkwọ akụkọ, na Mmụta | Martech Zone
Eziokwu na-abawanye ụba ga-arụ ọrụ ka ukwuu n'ọdịnihu gị. TechCrunch na-ebu amụma na mobile AR ga-abụkarị ahịa $ 100 ijeri n'ime afọ 4! Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ teknụzụ na-egbu egbu, ma ọ bụ na ụlọ ngosi ihe na-ere arịa ụlọ ọrụ, azụmahịa gị ga-erite uru n'ụzọ ụfọdụ site na ahụmịhe ahịa miri emi.
Kedu ihe dị iche na VR na AR?
Eziokwu Virtual (VR) bụ ntụrụndụ dijitalụ nke gburugburu ebe obibi onye ọrụ, ebe eziokwu dịwanye elu (AR) na-ekpuchi ihe ndị dị adị na ụwa n'ezie.
Ekwetaghị m? Lego anya na ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị na-anabata VR / AR.
Izu a CNN pụtara otu akwụkwọ akụkọ VR raara onwe ya nye. Otu a ga-ekpuchi ihe omume akụkọ kachasị na vidiyo 360 ma nye oche ndị nwere oche ahịrị n'ihu. You nwere ike iche n’ịnọ n’ihu agha na mpaghara agha, ịnwe oche ihu n’ahịrị na nchịkọta akụkọ White House na-esote, ma ọ bụ iguzo anya oke ajọ ifufe? Nke ahụ bụ ihe akwụkwọ akụkọ miri emi ga-eweta na tebụl, na-enye anyị ohere ịbịaru akụkọ ahụ nso karịa ka ọ dịbu. CNN malitere ulo oru ohuru site na ibiputa VR vidiyo akuko na-ekpuchi na-agba ọsọ nke ehi na Spain.
N’afọ gara aga, CNN nwara VR, na -emepụta ihe karịrị akụkọ akụkọ 50 na vidiyo 360 dị elu, na-enye ndị na-ekiri nghọta miri emi banyere mbibi nke Aleppo, elele ihu ụzọ nke US Inauguration na ohere iji nweta obi ụtọ. nke mbara igwe - na mkpokọta, na -emepụta ihe karịrị nde 30 nke ọdịnaya 360 na Facebook naanị. Isi Iyi: CNN
Mmụta Na-eri Ihe
Lowe's na-egbochi nzọ ya na VR nwere ike imebi ụlọ ọrụ mmezi ụlọ. Ha na-ebuputa ihe omuma ezi-uche di n’ime-ulo-ahia emere ka inye ndi ahia ahia banyere oru dika igwa ulo ma obu itinye ngidi. Na a ikpe na-agba ọsọ Lowe si kọrọ na ndị ahịa nwere a 36% chetara otu esi arụ ọrụ ahụ tụnyere ndị na-ele vidio Youtube.
Ndị otu Lowe na-ewu ewu achọpụtala na ọtụtụ puku afọ na-ahapụ ọrụ DIY n'ihi na ha enweghị obi ike nkwalite ụlọ na oge n'efu maka ọrụ. Maka Lowe, eziokwu dị adị nwere ike ịbụ ụzọ iji gbanwee omume a. Isi Iyi: CNN
Site na ahia ahia, a na-emezigharị okwu ahia immersive. Onye nwere ike ịmalite ịmalite iche n'echiche ohere ole ga - eme maka mgbasa ozi, itinye ngwaahịa, na ụzọ okike iji gosipụta akara. VR na-edozi ọtụtụ nsogbu maka ndị ahịa. Ọ na-enye anyị ụzọ iji mepụta ahụmịhe dị omimi nke na-emetụta, echefu echefu, ma na-atọ ọchị. Ọ nweghị ihe ka mma karịa nke ahụ!
Ihe ole na ole na-adọrọ mmasị maka gị. Vimeo ka gbakwunyere ike bulite ma lelee vidiyo 360-ogo. Nke a ga-enye ndị na-eme ihe nkiri na ihe okike ndị ọzọ iji gosipụta ma ree ọdịnaya 360. Ka anyị ghara ichefu banyere facebook ma. Ruo ugbu a enweela vidiyo vidiyo ogo otu nde na nde iri abụọ na ise na 360. Enweghị ihe mere ị ga-eji chee na omume a agaghị aga n'ihu.
Anyị ga-achọ ịnụ echiche gị banyere ọdịnihu nke VR / AR. Ego ole ka ị chere na ọ ga-enwe na ụlọ ọrụ gị? Biko kesaa!
Tags: CNNimikpummụta miri emiakwụkwọ akụkọ immersiveimmersive ahianwee nkena-ebelata holoroomVimeoOgbe 360